Semunhu anosvuta, njodzi yangu here yekuwana hutachiwana hweCOVID-19 hwakwira kupfuura hwemunhu asingasvuti?
Panguva yekugadzirira iyi Q & A, hapana zvidzidzo zvakaongororwa nevezera ravo zvakaongorora njodzi yehutachiona hweSARS-CoV-2 hune chekuita nekusvuta. Zvisinei, vanosvuta fodya (midzanga, mapombi emvura, mabhisikiti, fodya, zvigadzirwa zvinopisa zvefodya) vanogona kuve vari panjodzi yekubata COVID-19, sezvo chiito chekusvuta chinosanganisira kubata kweminwe (pamwe nemidzanga yakasvibiswa) nemiromo, izvo zvinowedzera mukana yekutapukirwa kwehutachiona kubva kuruoko kuenda kumuromo. Kuputa mapombi, anozivikanwawo sekuti shisha kana hookah, anowanzo sanganisira kugovana kwezvidimbu zvemuromo uye mapaipi, ayo anogona kufambisa kutapukirwa kwehutachiona hwe COVID-19 munzvimbo dzekudyidzana pamwe nemagariro.
Semunhu anosvuta, ndinogona here kuwana zviratidzo zvakanyanya kana ndikatapukirwa?
Kusvuta chero rudzi rwefodya kunoderedza kugona kwemapapu uye kunowedzera mukana wehutachiona hwakawanda hwekufema uye kunogona kuwedzera kukomba kwezvirwere zvekufema. COVID-19 chirwere chinotapukira icho chinonyanya kurwisa mapapu. Kusvuta kunokanganisa mashandiro emapapu zvichiita kuti zviomere muviri kurwisa coronaviruses uye zvimwe zvirwere zvekufema. Kutsvaga kuripo kunoratidza kuti vaputi vari pangozi yakanyanya yekukudziridzwa kwakakomba kweECVID-19 mhedzisiro uye kufa.
Semunhu anohodha, ndinowanzova neutachiona here kana kuva nezviratidzo zvakakomba kana ndikatapukirwa?
Iko hakuna humbowo nezvehukama pakati pekushandisa e-mudzanga uye COVID-19. Nekudaro, humbowo huripo hunoratidza kuti elektroniki nicotine dhirivhari masystem (ENDS) uye emagetsi asiri-nicotine kuendesa masystem (ENNDS), anowanzozivikanwa se e-midzanga, anokuvadza uye anowedzera njodzi yehosha yemoyo uye kusagadzikana kwemapapu. Tichifunga kuti hutachiona hwe COVID-19 hunokanganisa nzira yekufema, ruoko-kune-muromo chiito chekushandisa e-mudzanga kunogona kuwedzera njodzi yehutachiona.
Zvakadii nekushandisa fodya isina utsi, sekutsenga fodya?
Kushandisa fodya isina utsi kazhinji kunosanganisira kubata ruoko kumuromo. Imwe njodzi inosanganisirwa nekushandisa zvigadzirwa zvefodya isina utsi, senge yekutsenga fodya, ndeyekuti hutachiona hunogona kupararira kana mushandisi asvipa mate akawandisa anogadzirwa panguva yekutsenga.
Chii chinokurudzira WHO kune vanoshandisa fodya?
Ichipa njodzi kuhutano hunokonzerwa nefodya, WHO inokurudzira kurega fodya. Kurega kunobatsira mapapu ako nemoyo kuti zvishande zvirinani kubva panguva yaunomira. Mukati memaminetsi makumi maviri ekusiya, kukwidziridzwa kwemoyo uye kuwedzerwa kweropa. Mushure memaawa gumi nemaviri, iyo carbon monoxide level muropa inodonha kusvika pane yakajairwa. Mukati memasvondo maviri kusvika maviri, kutenderera kunovandudza uye basa remapapu rinowedzera. Mushure memwedzi 20-12, kukosora uye kufema kwekufema kunodzikira. Kuregedza kunobatsira kudzivirira vaunoda, kunyanya vana, kubva pakusvirwa noutsi hwefodya.
WHO inokurudzira kushandiswa kwekupindira kwakaratidzirwa kwakadai seyetoll-free yekurega mitsara, nharembozha-mameseji ekumisa zvirongwa, uye nicotine kutsiva marapirwo (NRTs), pakati pevamwe, kurega fodya.
Chii chandingaite kudzivirira vanhu kubva kuzviitiko zvine chekuita nekusvuta, kusvuta fodya uye kuputa?
Ukasvuta, shandisa e midzanga kana kushandisa fodya isina utsi, ino ndiyo nguva yakanaka yekurega zvachose.
Usagovane zvishandiso senge pombi dzemvura uye e-fodya.
Paradzira shoko nezve njodzi dzekusvuta, kushandisa e-midzanga uye kushandisa isina utsi fodya.
Dzivirira vamwe kubva kukuvadzwa nefodya yefodya.
Ziva kukosha kwekugeza maoko, kuregedza muviri, uye kusagovana chero kuputa kana e-fodya zvigadzirwa.
Usasvipira munzvimbo dzeruzhinji
Kushandisa nicotine kunokanganisa mikana yangu mune mamiriro eCOVID-19?
Parizvino pane ruzivo rwakakwana kusimbisa chero chinongedzo pakati pefodya kana nicotine mukudzivirira kana kurapwa kwe COVID-19. WHO inokurudzira vaongorori, masayendisiti uye vezvenhau kuti vangwarire pamusoro pekuwedzera zvirevo zvisina chokwadi zvekuti fodya kana nicotine inogona kudzora njodzi yeCOVID-19. WHO iri kuramba ichiongorora tsvagurudzo nyowani, kusanganisira izvo zvinoongorora kubatana kuri pakati pekushandisa fodya, kushandisa chikakananda, uye COVID-19.
Iko hakuna zvataurwa izvozvi. Iva wekutanga kutumira chirevo pane ichi chinyorwa!